फौजदारी अभियोगमा पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान पक्राउ – " कञ्चनजंगा News "
फौजदारी अभियोगमा पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान पक्राउ
No Comments on फौजदारी अभियोगमा पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान पक्राउ
ललितपुर : पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान राजेश महतो पक्राउ परेका छन्। साह दम्पत्ती आइतबार दिउँसो ललितपुर महानगरपालिका १८ बाट पक्राउ परेका हुन्।
‘फौजदारी अभियोगमा उहाँहरुलाई पक्राउ गरिएको हो’, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका डीएसपी नारायण चिमोरियाले भने।
वैशाख १३ गते मेडिसिटी अस्पतालले दिएको उजुरीका आधारमा साह दम्पत्ती पक्राउ परेको चिमोरियाले जानकारी दिए। मेडिसिटी अस्पतालले दिएको उजुरीमा आफ्नो सन्तान अस्पतालमै छोड्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले उनीहरुमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) अनुसार कारबाही हुने बताएको छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८४ (१) अनुसार उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने प्रहरीले बताएको छ। १८४ मा ‘आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यो दफाको उपदफा १ मा ‘कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने संहितामा व्यवस्था छ।
गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा गत वर्ष फागुन २८ गते बच्चा जन्माएकी थिइन्। बच्चा जन्मिएपछिको रिपोर्टमा अस्पतालले शिशुको स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको जनाएको थियो। तर, केही दिनपछि अस्पतालले नै भारतमा पठाएको नमुना परीक्षणबाट शिशुमा डाउन सिन्ड्रोम रहेको खुलेको थियो।
त्यसपछि साह दम्पत्तिले डा. निरासिंह श्रेष्ठ र उनी कार्यरत मेडिसिटी अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीको सिकार आफूहरु भएको भन्दै शिशुको डिस्चार्ज लेटर लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरुले अझैसम्म पनि डिस्चार्ज लेटर लिएका छैनन्। यही विषयलाई लिएर अस्पतालले उनीहरुविरुद्ध उजुरी दिएको थियो। सोही उजुरीका आधारमा उनीहरु पक्राउ परेको डीएसपी चिमोरियाकोभ भनाइ छ।
मेडिसिटी अस्पतालकै डा. श्रेष्ठको सल्लाह अनुसार साह दम्पत्ति उनको निजी क्लिनिकमा नियमित गर्भ परीक्षण गर्दै आएका थिए। तीन महिनामा गरिने परीक्षण नगरिदिँदा शिशुमा रहेको क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रोम पत्ता नलागेको दाबी उनीहरुको छ। अस्पतालले भने यसमा आफ्नो लापरबाही नरहेको दाबी गरेको छ।
‘अस्पतालले जबरजस्ती डिस्चार्ज गर्न खोज्दै छ’, केही दिनअघि मात्र अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै राजेश महतोले भनेका थिए, ‘आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अस्पतालले हामीलाई सिकार बनाएको छ।’
← पार्टीभित्रको रोदन पोख्दै दाहालले भने ‘फेरि जंगल जान पनि तयार छुु’ → रुसमा विमानमा आगो लाग्यो, ४१ को मृत्यु, तीनको अवस्था गम्भीर